COVID-19 Delta မျိုးစိတ် - Hello Sayarwon
COVID-19 Delta မျိုးစိတ် နဲ့ပတ်သက်လို့ သိထားဖို့လိုမယ့် အချက်
COVID-19 ကပ်ရောဂါက နေ့စဉ်တိုင်းမှာ စိန်ခေါ်မှု အမျိုးမျိုးနဲ့ မေးခွန်းများစွာကို ဖန်တီးနေပါတယ်။ နေ့စဉ်တိုင်း ကိုဗစ်ကြောင့် ခေါင်းထဲရောက်လာတဲ့ မေးခွန်းတွေကလည်း မနည်းမနောဖြစ်နေမှာပါ။ဒီလို များပြားလှတဲ့ မေးခွန်းတွေထဲမှာ လက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 Delta မျိုးစိတ် အကြောင်းလည်း ပါမယ် ထင်ပါတယ်။
ဥပမာ – ဒီမျိုးစိတ်က နောက်ထပ် ကိုဗစ်လှိုင်း တစ်ခုကို ဖြစ်စေမလား။ နောက်ထပ် lockdown တွေ လာမလား။ လက်ရှိကာကွယ်ဆေးတွေကရော ဒီပိုးကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါ့မလားဆိုတာမျိုးတွေပေါ့။ ဒီသိချင်နေမယ့် အချက်လေးတွေကို အခုဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
COVID-19 Delta မျိုးစိတ် ဆိုတာ ဘာလဲ……
COVID-19 Delta မျိုးစိတ် ကို B.1.617.2 လို့ သိကြပါတယ်။ အခြားမျိုးစိတ်တွေထက် ကူးစက်မှုနှုန်း မြန်တယ်လို့ CDC က ဆိုပါတယ်။ ဒီမျိုးစိတ်ရဲ့ မျိုးဗီဇ ပြောင်းလဲထားမှုက လူသားဆဲလ်တွေဆီ အလွယ်တကူ ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ သဘောကတော့ ဒီဗိုင်းရပ်စ် မျိုးစိတ်ဟာ အခြားမျိုးစိတ်တွေထက် ပိုပြီး ကူးစက်လွယ်တယ်ဆိုတာပါ။ ဒီမျိုးစိတ်က လက်ရှိမှာ ကမ္ဘာ အနှံ့အပြားမှာ ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။
ဒီမျိုးစိတ်ဟာ အရင်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Alpha မျိုးစိတ်ထက် ကူးစက်နှုန်း ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမြန်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ဒီမျိုးစိတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပိုမို သိရှိနိုင်ဖို့ လေ့လာမှုတွေ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ delta ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ရှိနေသူ တစ်ဦးဆီကနေ အခြား ၃ ဦး ဒါမှမဟုတ် ၄ ဦးအထိ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ Alpha ကတော့ တစ်ကြိမ်မှာ တစ်ဦး ဒါမှမဟုတ် နှစ်ဦးအထိပဲ ကူးစက်နိုင်တာပါ။
Delta မျိုးစိတ်က နောက်ထပ် ကိုဗစ်လှိုင်းတစ်ခုကို ဖြစ်စေမလား……….
ဒါကတော့ ပြောနေစရာ မလိုအောင်ပါ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရော မြန်မာနိုင်ငံမှာပါ ဒီမျိုးစိတ်ကြောင့် ကိုဗစ်ရဲ့ နောက်ထပ်လှိုင်းတစ်ခုက ဖြစ်ပြီးနေပါပြီ။ လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိုဗစ်ခံစားနေရသူ အများစုမှာ ခံစားနေရတဲ့ ကိုဗစ် ဗိုင်းရပ်စ်က Delta မျိုးစိတ်ပါ။
နောက်ထပ် lockdown တွေ လာမလား……….
ကိုဗစ် ဗိုင်းရပ်စ် Delta မျိုးစိတ်ကြောင့် lockdown ချမှတ်မှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း မလိုအပ်ရင် အပြင်သွားလာတာမျိုး မလုပ်သင့်သလို လူစုလူဝေးလုပ်တာတွေကို ဆက်လက်ရှောင်ကြဉ်ဖို့ လိုဦးမှာပါ။
COVID-19 Delta မျိုးစိတ်က တကယ်ပဲ စိတ်ပူဖို့ လိုမလား………
နားလည်လွယ်အောင် ပြောပြရရင် ဒီမျိုးစိတ်က အခြားမျိုးစိတ်တွေထက် ကူးစက်လွယ်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ ကိုဗစ် Delta မျိုးစိတ်က Alpha မျိုးစိတ်ထက် ကူးစက်မှု ပိုမြန်ပြီး ရောဂါခံစားရတာလည်း ပိုမို ပြင်းထန်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီမျိုးစိတ်ကို သေချာလေး ကာကွယ်ဖို့ လိုပါမယ်။
COVID-19 Delta မျိုးစိတ် ကူးစက်ခံရရင် ဘယ်လို လက္ခဏာတွေ ခံစားရနိုင်လဲ……….
Delta မျိုးစိတ် ကူးစက်ခံရရင် ခံစားရမယ့် လက္ခဏာတွေက အရင် ကိုဗစ်နဲ့ လက္ခဏာတွေ ဆင်တူပါတယ်။
နှာစေးတာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒီမျိုးစိတ် ကူးစက်ခံရသူတွေမှာ အနံ့ပျောက်တာက ဖြစ်ခဲပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေးတွေကရော Delta မျိုးစိတ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါ့မလား…………
သုတေသန ရလဒ်တွေအရတော့ ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝ ထိုးနှံထားတဲ့သူတွေဟာ Delta မျိုးစိတ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးက ရောဂါ ပြင်းပြင်းထန်ထန် မခံစားရအောင် ကာကွယ်ပေးသလို အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်မှုတွေကိုလည်း လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အမေရိကန်မှာတော့ Pfizer ဒါမှမဟုတ် Moderna ကာကွယ်ဆေးကို နှစ်ကြိမ်လုံး ထိုးနှံ ပြီးတဲ့သူတွေနဲ့ Johnson & Johnson’s ကာကွယ်ဆေး ပထမအကြိမ် ထိုးနှံပြီးသူတွေမှာ ဒီ Delta မျိုးစိတ်ကို အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ သုတေသနရလဒ်တွေအရ သိရပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးရင်လည်း ကာကွယ်မှု နည်းလမ်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ ပါးစပ်နဲ့ နှာခေါင်းစည်း တပ်ဆင်တာ၊ ခပ်ခွာခွာ နေထိုင်တာတွေကို လိုက်နာဆောင်ရွက်တာက အကောင်းဆုံးပါ။ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံထားသူတွေမှာ Delta ပိုး ကူးစက်ခံခဲ့ရရင်တောင်မှ ရောဂါပြင်းထန်တာမျိုး ဖြစ်ခဲပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ ကာကွယ်ဆေး ထိုးဖို့ အကောင်းဆုံးလဲ………
ကာကွယ်ဆေးကတော့ မြန်နိုင်သမျှ မြန်မြန် ထိုးနှံတာက အကောင်းဆုံးပါ။ လက်ရှိမှာ ကူးစက်နှုန်းက အရမ်း မြင့်တက်နေတာကြောင့် စိတ်ချရတဲ့ ကာကွယ်ဆေးကို မြန်နိုင်သမျှ မြန်မြန် ထိုးလိုက်တာကတော့ အကောင်းဆုံးပါ။
ကာကွယ်ဆေး မထိုးနှံနိုင်သေးခင်မှာတော့ အာဟာရပြည့်ဝအောင် စားသုံးတာ၊ နေ့စဉ်ဘဝမှာ ခပ်ခွာခွာ နေထိုင်တာ၊ မကြာခဏ လက်ဆေးတာ၊ အိပ်ရေးဝဝ အိပ်တာ၊ သင့်တင့်တဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးပြီး ကိုဗစ်ကို အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ပါ။
Delta Plus မျိုးစိတ်က ဘာလဲ………..
Delta Plus မျိုးစိတ်ကို B.1.617.2.1 (သို့မဟုတ်) AY.1 လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Delta မျိုးစိတ်ရဲ့ မျိုးစိတ်ကွဲတစ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆုတ်ဆဲလ်တွေကို ပိုမိုတိုက်ခိုက်နိုင်စေဖို့နဲ့ ကာကွယ်ဆေးဒဏ်ကို ခံနိုင်စေဖို့ မျိုးဗီဇ ပြောင်းလဲထားတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီမျိုးစိတ်ကို အိန္ဒိယမှာ စတင်တွေ့ရှိတာဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ယူကေနဲ့ အမေရိကန်မှာလည်း တွေ့ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံတွေအပြင် အချို့နိုင်ငံတွေမှာလည်း ရောက်ရှိနေပြီလို့ သိရပါတယ်။
3 Things to Know About the COVID-19 Delta Variant https://www.houstonmethodist.org/blog/articles/2021/jul/3-things-to-know-about-the-covid-19-delta-variant/ Accessed Date3August 2021
https://www.yalemedicine.org/news/5-things-to-know-delta-variant-covid Accessed Date3August 2021
https://www.webmd.com/lung/news/20210712/what-to-know-about-covid-delta-variant Accessed Date3August 2021
တုပ်ကွေးနဲ့ ကိုဗစ် ဘာတွေတူလို့ ဘာတွေကွဲ